IsiNgxoxo IsiNgesi Isifundo Ngamafilimu kunye nabadlali
Isifundo seNgesi Isifundo
Abantu bathanda ukuthetha ngezinto abazibonayo kwi-cinema. Naliphi na iklasi liza kuba nolwazi kakuhle kwiifilimi zelizwe lakubo kunye neyokugqibela kunye neyona ndawo inkulu evela eHollywood nakwezinye iindawo. Esi sifundo sinceda ngokukhethekileyo kubafundi abasebancinci abanokungabaza ukuthetha ngokuphila kwabo. Ukuthetha ngefilimu kunika ifonti engapheliyo yokufumana ingxoxo. Nazi iimbono ezimbalwa:
Injongo: Ukukhuthaza intetho , ngakumbi nabafundi abasebancinci abanokungabaza ukuthetha ngobomi babo.
Umsebenzi: Ukwethulwa ngokubanzi kwiifilimu, ukunyanzeliswa kunye nokuvalela okufutshane, ukulandelwa ngabafundi 'ngokuxoxa ngeempendulo zabo ekuphenduleni imibuzo.
Umgangatho: ophakathi ukuya phambili
Inkcazo Yengxoxo Ngamafilimu kunye nabadlali
Fundisa isihloko ngokucela abafundi ukuba babonise iintlobo ezahlukeneyo zefilimu kunye nefilimu abayazi ngayo loo nto ibonisa olo hlobo.
Umzekelo: Ulwahlulo - iManhattan nguWoody Alan
Misela le mibuzo ilandelayo kubafundi. Bafuna kuphela ukubhala iimpendulo zabo.
Yintoni oyithandayo ongewona oyiNtaliyane, isiJamani, isiFrentshi, njl. (Ubizwa ngokuba ngubuzwe)?
Yintoni oyithandayo oyiNtaliyane, isiJamani, isiFrentshi, njl. (Ubiza uhlanga)?
Ngubani umdlali wakho oyintandokazi okanye umdlali we-actress?
Yiyiphi ifilimu eyingozi kunazo zonke ozibonayo?
Ngokombono wakho, ngubani na umdlali onzima kunazo zonke okanye umdlali wefilimu namhlanje?
Yenza abafundi babeke eceleni iimpendulo zabo kule mibuzo ingentla. Funda inkcazo emfutshane yefilimu enikezelwe kwesi sifundo (okanye faka inkcazo emfutshane yefilimu oyaziyo ukuba abaninzi abafundi bayibonile). Buza abafundi ukuba bathi igama lefilimu.
Yenza abafundi bahlule babe ngamaqela amancinci baze baxoxe ngefilimu abaye bayibona.
Emva kokuba baxoxe ngefilimu, bacele ukuba babhale inkcazelo emfutshane yefilimu efana neyifunde eklasini.
Amaqela afunda isishwankathelo saso ngokuzwakalayo kwamanye amaqela afuna ukubiza iifilimu ezichazwe. Ungakwazi ukujika ngoku lula kumdlalo omncinci wokuncintisana ukubeka inani lexesha iinkcazo zikwazi ukufunda ngokuvakalayo.
Ukubuyela kumbuzo ekuqaleni kweklasi, cela umfundi ngamnye ukuba akhethe enye ye mibuzo kwaye uphendule lo mbuzo uchaza kwabanye abafundi izizathu zokukhetha le filimu okanye umdlali / umdlali weyona nto eyona nto ibhetele kakhulu. Ngethuba le nxalenye yesifundo, abafundi kufuneka bakhuthazwe ukuba bavumelane okanye bangavumelani kwaye bafake amazwana abo kwingxoxo ekhoyo.
Njengomsebenzi wokwenza umsebenzi wesikolo ekhaya, abafundi bangabhala ukuhlaziywa okufutshane kwefilimu abone ukuba iya kuxutyushwa kwiseshoni elandelayo.
Buza abafundi ukuba bathi igama lefilimu: Le filimu iqhutyelwa kwisiqithi saseNtaliyane. Umlobi okhoxwayo, okhomanisi ufika kwisiqithi kwaye ngokukhawuleza waba ngumhlobo nomntu olula, wendawo. Ifilimu ibonakala ngathi malunga nokufunda okungenzeka phakathi kwabahlobo. Ngexesha lefilimu, imbongi ibancedisa umhlobo wakhe ukuba achukumise umfazi omncinci omhle ukuba abe ngumfazi ngokumnceda umntu abhale iileta zothando.
Ifilimu ilandela ukukhula komntu omncinane, olula ngokuqhagamshelana naye nendoda edumileyo.
Impendulo: "I-Postman" nguMassimo Troisi - Italy, ngo-1995
Qondisisa Iklasi Yakho - Uphononongo olonwabileyo lwabafundi be-ESL / EFL
Ukubuza imibuzo - Izinga eliphezulu
Isiqalo esingaqaliyo IsiNgesi - 20 Iprogram yePoint
Iintsika ezi-7 zeBhizinisi
Abancinane abamnyama baseMerika